Seranan’Ivato: fiofanana avo lenta amin’ny fiarovana | NewsMada
Nanomboka ny 2 ary hifarana ny 16 avrily ny fiofanana avo lenta, mikasika ny fiarovana ny sivily eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato. Nitarika ny fiofanana ny teknisianina roa lahy frantsay, manampahaizana manokana amin’ny fitiliana sy ny fanalana vanja na baomba milevina na miafina. Miisa 20 ireo nahazo fiofanana, nahitana zandary efatra, polisy efatra,10 ny avy amin’ny Fiaraha_miasa ho fiarovana ny sivily (CPC) ary mpiasa ambony roa ao amin’ny seranam-piaramanidin’Ivato.
Fiarovana sy famonjena
Tanteraka ity fiofanana ity taorian’ny tetikasa naroson’ny tompon’andraikitra ao amin’ny CPC, mpirakidraharaha mikasika ny filaminana anatiny ao amin’ny masoivoho frantsay eto Madagasikara. Miara-miombon’antoka amin’izany ny mpisehatra samihafa, ny Ravinala Airports, ny Aviation civile Madagasikara (ACM), ny mpitandro filaminana ary ny CPC.
Misy ny fifanarahana vita sonia eto amin’ny Ravinala Airports sy ny CPC, mikasika ny fepetra raisina sy ny fiarovana mikasika ny famonjena sy ny vonjy taitra, ny fanairana raha sendra misy ahiahy mety ho fisian’ny baomba, sns.
Dingana iray ahazoan’ny seranan’Ivato ny mari-pahalalana amin’ny fananana ny fenitra iraisam-pirenena ity fiofanana ity, sady anisan’ny fepetra ampidirina sy takina amin’ny lafiny fanadihadiana (audit) takin’ny rafitra iraisam-pirenena Oaci. Manampy amin’ny fanomezana antoka ny mpandeha izany ary manana anjara amin’ny fampiroboroboana ny fizahantany eto Madagasikara rahateo.